စံစစ်တမ်းများသင်တန်းသားများအဘို့အ boring, ဒါပေမယ့်လုပ်နိုင်တဲ့နှင့်ပြောင်းရမယ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအင်တာဗျူးများအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ကြောင်းတောင်းဆိုသစ်ကိုချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းကိုပြောပါတယ်။ သို့သော်ကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအင်တာဗျူးတွေတဦးကျဘက်ကိုပါဝင်မှုကြဉ်းကူညီမှမကလူ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းရှိကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းများအချိန်ကုန်နှင့်ငြီးငွေ့စရာနှစ်ခုလုံးကြောင့်ဒါကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်အတွက်စစ်တမ်းကောက်ဒီဇိုင်နာများသူတို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုပတ်ပတ်လည်ဒီဇိုင်းနှင့်ပိုပြီးပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းကဲ့သို့မေးခွန်းများကိုဖြေကြား၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်သွားကြသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတခါတရံ gamification ဟုခေါ်သည်။
ပျော်စရာစစ်တမ်းတူစေခြင်းငှါ, အဘယျသို့သရုပျဖျောဖို့, ရဲ့ Friendsense, Facebook ပေါ်မှာဂိမ်းအဖြစ်ထုပ်ပိုးခဲ့ကွောငျးစစ်တမ်းတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။ Sharad Goel, ဆောင်းရာသီ Mason ဆိုနှင့် Duncan က Watts (2010) ကလူသူတို့မိတ်ဆွေတွေကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နှင့်မည်မျှသူတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူတကယ်ရှိပါတယ်ထင်ဘယ်လောက်ခန့်မှန်းရန်ချင်တယ်။ စစ်မှန်သောနှင့်ရိပ်မိသဘောထားကိုတူညီအကြောင်းကိုဤမေးခွန်းကိုတိတိကျကျသူတို့ရဲ့လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်ရိပ်မိဖို့လူရဲ့စွမ်းရည်မှာတိုက်ရိုက်ရရှိသွားတဲ့နှင့်နိုင်ငံရေး polarization ကိုနှင့်လူမှုရေးပြောင်းလဲမှု၏ဒိုင်းနမစ်များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ သဘောတရားမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်ရိပ်မိသဘောထားကိုဆငျတူတိုင်းတာရန်လွယ်ကူသောအရာဖြစ်၏။ အဆိုပါသုတေသီများပဲဒီတိုင်းတာခြင်းဘို့ခွင့်ပြု (သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့် ပတ်သက်. လူတွေအများကြီးမေးခဲ့တယ်, ပြီးတော့ (ဒီကိုမှန်ကန်သဘောထားကိုသဘောတူညီချက်၏တိုင်းတာခြင်းဘို့ခွင့်ပြု) သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများဟုမေးမိမိတို့မိတ်ဆွေများ '' သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းဖို့လူအများကြီးမေးနိုင်ပါပြီနိုင် ရိပ်မိသဘောထားကိုသဘောတူညီချက်) ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တကတုံ့ပြန်နှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးကိုအင်တာဗျူးဖို့ဖြစ်ဖြစ်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကွောငျ့, Goel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကစားရန်ပျော်စရာခဲ့တဲ့ Facebook app ကိုစသူတို့၏စစ်တမ်းလှည့်။
တစ်ဦးပါဝင်သူသုတေသနလေ့လာမှုမှာဖြစ်ရဟုဝန်ခံပြီးနောက်, app ကိုတုံ့ပြန်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရှေးခယျြနှင့်အဆွေခင်ပွန်း၏သဘောထားကို (ပုံ 3.9) အကြောင်းမေးခွန်းမေးခဲ့တယ်။ ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်မိတ်ဆွေများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအတူရောနှောခြင်း, တုံ့ပြန်လည်းသူ့ကိုယ်သူအကြောင်းကိုမေးခွန်းများကိုဖြေကြားခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းဖြေဆိုပြီးနောက်, တုံ့ပြန်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်လျှောက်သော်မပါလျှင်, တုံ့ပြန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအားပေးနိုင်ခဲ့သည်, သူမ၏အဖြေကိုမှန်ကန်ခဲ့ရှိမရှိကပြောသည်သို့မဟုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်စုဆောင်းမှုအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်စစ်တမ်းကောက်ပျံ့နှံ့။
အ Friendsense လေ့လာမှုကနေ Interface ကို: 3.9 ပုံ (Goel, Mason, and Watts 2010) ။ သုတေသီတစ်ဦးပျော်စရာသို့ gamelike အတှေ့အကွုံတစ်ဦးစံသဘောထားကိုစစ်တမ်းလှည့်။ ဒီ app သင်တန်းသားများကိုလေးနက်သောမေးခွန်းများကိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဤပုံဤမှာပြထားတဲ့တစ်ဦးအဖြစ်ပိုပြီးပုံစံမျိုးမေးခွန်းတွေကိုနှစ်ခုစလုံးကိုမေးခဲ့တယ်။ Sharad Goel ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြု Image ကို။
အဆိုပါသဘောထားကိုမေးခွန်းများကိုအထွေထွေလူမှုစစ်တမ်းမှအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, "[သင်၏အဆွေခင်ပွန်း]? အရှေ့အလယ်ပိုင်းအခြေအနေမှာအစ္စရေးနှင့်အတူပါလက်စတိုင်းထက်ပိုပြီးစာနာတတ်" နှင့် "မယ်ဆိုတာ [သင်၏အဆွေခင်ပွန်း] အစိုးရအတစ်လောကလုံးကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်အဘို့အမြင့်မားအခွန်ပေးဆောင်?" ဤအလေးနက်မေးခွန်းတွေထိပ်တွင် "အစားပျံသန်းဖို့အာဏာ, မယ်ဆိုတာ [သင်၏အဆွေခင်ပွန်း] အစားစိတ်ဖတ်ရှုဖို့အာဏာကိုပြနိုင်ကြသလော" နှင့်ဤအမှုပုံစံမျိုးမေးခွန်းတွေကိုလုပ် "မယ်ဆိုတာ [သင်၏အဆွေခင်ပွန်း] အစားဘီယာကျော်သောစပျစ်ရည်ကိုမသောက်?": သုတေသီပိုပြီးပုံစံမျိုးမေးခွန်းတွေကိုအတွက်ရောစပ် သဘောထားကိုသဘောတူညီချက်သောက်သုံးရေနှင့်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုပုံစံမျိုးမေးခွန်းတွေကိုအဖြစ်အလေးအနက်နိုင်ငံရေးအရမေးခွန်းများကိုများအတွက်အလားတူဖြစ်လိမ့်မယ်: ကိုပိုသင်တန်းသားများပျော်စရာနှင့်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှိုင်းယှဉ် enabled?
လေ့လာမှုကနေသုံးအဓိကရလာဒ်များရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာမိတ်ဆွေတွေသူစိမ်းထက်တူညီတဲ့အဖြေကိုပေးဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြပေမယ့်ပင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေနေဆဲမေးခွန်းတွေအကြောင်း 30% အပေါ်သဘောမတူ။ ဒုတိယအချက်မှာ Over-ခန့်မှန်းသူတို့၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သဘောတူညီချက်ဖြေဆိုသူ။ တစ်နည်း, မိတ်ဆွေတွေအကြားတည်ရှိကြောင်းထင်မြင်ယူဆ၏မတူကွဲပြားမှုအများစုသတိထားမိသည်မဟုတ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်တန်းသားများကိုသောက်ရေနှင့်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုပုံစံမျိုးကိစ္စများထက်နိုင်ငံရေးကို၏လေးနက်သောကိစ္စရပ်များအပေါ်သူတို့၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူသဘောထားကှဲလှဲမှုသတိထားဖ​​ြစ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိနေကြ၏။
app ကိုမရှိတော့ (ကံမကောင်း) ကစားရန်မရရှိနိုင်ပေမဲ့, ကသုတေသီတွေကပျော်စရာတစ်ခုခုသို့စံသဘောထားကိုစစ်တမ်းနိုင်ပုံကိုတစ်ဦးကောင်းတဲ့စံနမူနာခဲ့သည်။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, အခြို့တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဒီဇိုင်းအလုပ်နှင့်အတူ, ကစစ်တမ်းသင်တန်းသားများအတွက်အအသုံးပြုသူအတှေ့အကွုံတိုးတက်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်စစ်တမ်းတစ်ခုဒီဇိုင်းကြသည်လာမည့်အချိန်, သင်သည်သင်၏သင်တန်းသားများအဘို့အတှေ့အကွုံပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရာကိုစဉ်းစားရန်ခဏယူပါ။ တချို့က gamification ဆီသို့သည်ဤခြေလှမ်းများဒေတာရညျအသှေးကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းကြောက်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါပျင်းသင်တန်းသားများကိုဒေတာအရည်အသွေးဝေးသော သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။
အခြားဒေတာသတင်းရပ်ကွက်မှစစ်တမ်းများချိတ်ဆက်: Goel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအလုပ်ကိုလည်းနောက်လာမည့်အပိုင်း၏အဓိကအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဤကိစ္စတွင် Facebook ကအတူစစ်တမ်းချိတ်ဆက်အားဖြင့်သုတေသီများအလိုအလျောက်သင်တန်းသားများကို '' အဆွေခင်ပွန်းများစာရင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လာမည့်အပိုင်းများတွင်, ငါတို့သည် သာ. အသေးစိတ်စစ်တမ်းများနှင့်အခြားဒေတာသတင်းရပ်ကွက်များအကြားချိတ်ဆက်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။